Qurbojooga Somaliland oo ka dhiidhiyey dagaalka xaga saxaafada ee BBCSomali ku hayso Somaliland bilaabayna Petition ka dhan ah oo loo gudbindoono qaybta maamusha guud ahaan afafka kala ee Idaacada bbc da ka baxa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on June 2, 2019 by sdwo · No Comments
Somalilandeye (London)- Qurbajooga reer Somaliland ee ku dhaqan daafaha dunida, gaar ahaan kuwa ku nool dalka Boqortooyada Ingiriiska, ayaa bilaabay olole ka dhan ah oo ay kaga soo horjeedaan Idaacada BBC-da laanteeda Afka- Somaliga.
Ololahan ayaa waxa uu ka dhashan ka dib markii beryahan danbe idaacadaasi caddeysatey cadaawada ay u hayso dalka iyo dadka reer Somaliland, iyadoo saddex cisho ka hor baraha internetka ay ku leeyihiin ku faafiyey qoraal ay ku durayaan qaddiyada Somaliland oo ay rabaan inay ku marin habaabiyeen rayul caalamka.
Qoraalkaasi oo ay cinwaan uga dhigeen “Nigel Farage: “Cadawga Midowga Yurub” ee taageeray Somaliland”, ujeedadda ugu weyn ee ay ka laahyeena ay tahay in qaddiyada Somaliland ay ka dhigaan mid ay taageeraan Nigel Farage iyo xisbigiisa oo lagu tiriyo kuwo xagjira oo si xooggana u taageersan in UK ka baxdo Midowga Yurub, isla markaana Somaliland lagu shaanbadeeyo mid cadow u ah Midowga Yurub. Sidoo kale waxa xusid muddan in wakhtiga ninkani hadalkan sheegey aanay BBC-du soo werin warkiisa, hase yeeshee maanta oo Britain ka baxayso Yurub ay war cusub ka dhigaan.
Haddaba tan intii ay warkan BBC-Somali ku baahisey barteeda internetka waxa baraha bulshada ku kulmaan lasoo dhigeyey qoraalo lagaga soo horjeedo idaacadan oo lagu tilmaamayey mid aan dhex ka ahayn arrrimaha Soomaalida oo u digo rogatey Radio Muqdisho 2aad. Waxaana durba Qurbajooga reer Somaliland qaadeen tallaabooyin hor leh oo ay cabasho ugu gudbinayaan masuuliyiinta sare Idaacada BBC- World Service oo ay laantani hoos tagto. Sidoo kalena waxa la bilaabay saxeexa qoraal (Petition) lagu ururinayo magacyada dadka reer Somaliland oo uu ku lifaaqan yahay waxyaabaha ay kaga cabanayaan Raadiyaha BBC-Somali, kaasi oo marka uu soo dhamaystirno lagu waddo in loo gudbin doono Masuuliyiinta sar sare ee idaacadan.
Baraha bulshadana waxa hadheeyey 24-saacadood ee u danbeeyey qoraalkan lagaga soo horjeedo idaacada, inkastoo lagu jiro 10-kii cisho ee u danbeeyey bisha Barakeysan ee Ramadan oo aad loo cibaadeysanayo, haddana waxaad moodaa in ayna ka joojin Somalilanders-ka dafaha dunida degan inay muujiyaan cadhada ay u qabaan Laanta Afka-Somaliga ee BBC-da oo isa soo tareysay beryahan danbe.
Halkan kale soco wararka ku saabsan Laanta BBC-da oo aanu si joogta idiinku soo gudbin doona haddii Allah idmo